Israely: Tatitry ny Rosiana iray, mpanao gazety an-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2009 18:55 GMT
Dmitry Kostyukov (LJ user kostyukov), mpanao gazety Rosiana, dia mamita iraka any Israely amin'izao fotoana izao. Tamin'ny volana Aogositra 2008, nandrakotra ny ady tany Osetia atsimo izy, ary ity misy fampisehoana mandritra ny 6 minitra ny sary nalainy tany:
Hatramin'ny namoahany iny sary iny tao amin'ny blaoginy tamin'izy efa tany Israely, nametraka fanontaniana avesa-danja ny iray tamin'ireo mpamakiny (amin'ny teny Rosiana):
Tsy misy hevitra ambadika eto, na ankiafinafina… tsotra avikoa ny zava-drehetra. Voalohany, ny ady dia nampatsiahy ahy ny ady (na dia tsy tena nanadino ny momba azy iny aza aho), ary faharoa, nandefa [sarin'i Osetia maromaro] aho tao amin'ny [fifaninànana maka sary tao amin'ny World Press], noho izany dia rariny ny nandefasako azy rehetra ato.
12 Janoary 2009:
Amin'ity ady ity, anaty kitapo iray toy ireo mpanao gazety tany Georgie tany [Gori] aho – tsy misy na inona na inona azo raisina […].
17 Janoary 2009:
19 Janoary 2009:
Saika maty izahay androany. Ankehitriny dia mànana fahatsapàna hafahafa aho. Mieritreritra hoe segondra kely fotsiny dia vita matavy… Matetika, matimaty foana ny mpanao gazety. Tsy hitanay akory hoe misy toeram-pitiliana miafina ary tsy nijanona izahay raha tsy efa ny fipikan'ny fanalàna ny aro loza (cran de surété) sy ny vava basy efa mitodika amin'ny lohanay metatra vitsy monja avy eo. Hafahafa, fa amin'ny fotoana sahàla amin'ireny, ny hany hitanao dia ny maso[n'ilay olona efa vonona hitifitra]. Ny amiko aloha tsy fantatro, fa ilay mpiara-miasa amiko […] dia lasa fotsy sahala amin'ny lamba tao anatin'ny iray segondra. Any Georgie, novonoina tamin'ny fomba tsy dia mazava ilay mpaka sary iray ao amin'ny TASS [Aleksandr Klimchuk] – namaly izy hoe ‘Gamarjoba’ [‘manao ahoana’ amin'ny teny Georgien] […] tamin'ny arahaban'ireo avy any Ossetie. Ary amiko, ohatran'ny tsy nisy n'inon'inona tena niseho, fa 10 minitra avy eo izay vao nangovitra anaty toy ny avy nisotro kafe folo kaopy aho.
ato sy ato ireo sarin'ny fisintahan'ny tafika Israelianina nalain'i Kostyukov.